Maamulka Gobolka Sool oo Doortay duq Degmo oo Cusub – Radio Daljir
Abriil 5, 2015 12:19 b 0
Axad, Abriil 05, 2015 (Daljir) —Shir aan caadi ahayan oo shalay ka dhacay qolka shirarka dowaladaha hoose ee magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa xilkii looga qaaday duqii degmada, isla markaana lagu doortay maayar cusub.
Kulankan oo ay goob-joog ka ahaayeen 20-ka xubnood ee goluhu ka kooban yahay; ayaa waxaa sidoo kale ka qaybgalay mas’uuliyiinta heer gobol iyo degmo ee gobolka Sool.
Guddoomiyaha gobolka Sool, Yaasiin Maxamed Shidde ayaa ka hor xil-ka-qaadista wuxuu sheegay in xildhibaanno toddobo ahi ay soo codsadeen in cod loo qaado Duqa degmada, C/qaadir Jaamac Saalax, wuxuuna intaas ku daray inay waajib tahay in la fuliyo codsigooda.
Kal-fadhigan aan caadiga ahayn oo la sugayay maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa u codeeyay 16 xubnood in xilka laga qaado Duqa Laascaanood; halka uu hal mudane diiday, labana ay ka aamuseen.
Cismaan Saleebaan Jaamac ayaa golaha deegaanka degmada Laascaanood ay u doorteen Duqa degmada Laascaanoood, kaddib markii uu 18 cod ku guulaystay; hal cod oo keliyana ka waayay xubnihii kulanka joogay.
Xoghayaha dowladaha hoose ee degmada Laascaanood, Faa\_’is Cali Madoobe ayaa ku dhawaaqay in Cismaan uu yahay Duqa degmada Laascaanood laga billaabo maanta, sidoo kalena waxaa hadlay duqii hore ee Laascaanaood oo sheegay inuu ku qancay cod bixinta lagaga guulaystay uuna aqbalay.
Golaha deegaanka ee degmada Laascaanood ayaa bilihii aynu soo dhaafay waday olole ay kaga soo horjeedaan hoggaankooda; iyagoo ku eedaynayay musuq-maasuq iyo boob hantiyeed.
Hawlaha wax qabad ee dowladda hoose ayaa hoos u dhac weyni ku yimid bilihii lasoo dhaafay waxaana sii murgiyay markii khilaaf baahsan uu ka dhex aloosmay shirkado nadaafadda magaalada qaabilsan; taasoo dowlada hoose ay ku guul daraysatay inay xallliso.
BARNAAMIJKII CAAWA IYO DALJIR -TALAADO 07-[DHAGEYSO]